INew Boeing 737 MAX yeWhite Whitewash: Abaphathi beBoeing abazifihla emva koMntu omnye oWileyo?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » INew Boeing 737 MAX yeWhite Whitewash: Abaphathi beBoeing abazifihla emva koMntu omnye oWileyo?
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase-Ethiopia eziQhekezayo • udliwano • iindaba • abantu • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • yokuzonwabisa
U-Boeing ukhohlise i-FAA ekuqinisekiseni i-Boeing 737 MAX, ebangela ukuba abantu abayi-157 babulawe kwi-Airlines yase-Ethiopia. Igqwetha eliphambili elimele isiqingatha samaxhoba lithetha phandle kwi eTurboNews Imibuzo neempendulo namhlanje.
Iintsapho ezilahlekelwe ngabantu ababathandayo kwingozi yenqwelomoya ye-Boeing 737 MAX kwi-201,9 ibulala bonke abayi-157 ababekhwele yayinamagama arhabaxa nge-Boeing.
Igqwetha lathi urhulumente wase-US akazange aye kude ngokwaneleyo kwityala lika-Mark Forkner ngoLwesine (nge-14 ka-Okthobha ka-2021).
Owayesakuba ngumqhubi wenqwelomoya wenqwelomoya omtsha wagwetywa izolo liSebe lezoBulungisa lase-US ngamatyala amathandathu ngezenzo zakhe, kubandakanya nokuxoka ngexesha lenkqubo yokuqinisekiswa kwenqwelomoya entsha.
eTurboNews umeme u-Kevin P. Durkin we-Clifford Law Firm e-Chicago, IL, e-USA, ukuba athethe ngexesha le-podcast namhlanje. Umele amaxhoba angaphezu kwama-70 asweleke kwi-Airlines zase-Ethiopia kwingozi ye-Boeing 737 MAX.
“UForker ungumntu nje owileyo. Yena noBoeing banoxanduva lokusweleka kwabo bonke abantu abasweleke kwiingozi ze-MAX, utshilo uNadia Milleron, umama kaSatya Rose Stumo, owabulawa kwingozi yesibini eyabulala abantu ngo-Matshi ka-2019. Ukufumana imali ngokhuseleko, kwaye uMark Forkner wayesebenza ngaphakathi kwenkqubo. Abatshutshisi banakho kwaye kufuneka bafumane abantu abambalwa ababekwanoxanduva lokudala ingozi. Lonke usapho olulahlekelwe ngumntu kwiMAX luziva ngendlela efanayo: abaphathi kunye nebhodi yabalawuli beBoeing kufuneka baye ejele. ”
Ingozi yenqwelomoya iTopiya 302 yenzeke emva kokumka ngoMatshi 2019, yabulala bonke abali-157 ababekhwele. Kwiinyanga ezintlanu ngaphambili, ngo-Okthobha u-2018, indiza yokuqala iBoeing 727 MAX yaphahlazeka kuLwandle iJava emva kokuba isukile e-Indonesia, yabulala bonke abayi-189 ababekhwele apho.
Isivumelwano esitshutshisiweyo soTshutshiso yayiyinyani ye-DOJ Boeing 'Musa ukuTshutshisa isiVumelwano.' Akukho mntu ukholelwa ngenene ukuba uForker wayekuphela komdlali obalaseleyo kolu xinzelelo lunzima lwenzuzo kunye nesikimu sokuqhatha i-FAA, utshilo uMichael Stumo, utata kaSonya Rose Stumo. "Ibonisa ukuba u-CEO we-Boeing u-David Calhoun kunye namalungu ebhodi angaphosa nabani na phantsi kwebhasi ukukhusela i-C-Suite."
I-DOJ izise ityala lolwaphulo-mthetho ngokuchasene noBoeing ngokubulala abantu abangama-346 kwezi ngozi zimbini kodwa walungisa ityala ekuqaleni kwalo nyaka kwinto ebizwa ngokuba sisiVumelwano soTshutshiso esiDlulisiweyo. UNjingalwazi woMthetho waseColumbia uJohn Coffee ngelo xesha wayezibiza ngokuba "sesinye sezivumelwano zokutshutshisa ezimisiweyo endakha ndazibona." U-Boeing akunyanzelekanga ukuba alivume ityala kwezi zityholo, kwaye akukho sigqeba se-Boeing esihlawulisiweyo. Ifemu yezomthetho ekhokelwa ngu-Boeing e-Kirkland nase-Ellis. U-Erin Nealy Cox, umtshutshisi ophambili kwityala le-Boeing, washiya iSebe lezoBulungisa ekuqaleni kwalo nyaka kwaye kungekudala emva koko wajoyina iKirkland kunye no-Ellis njengeqabane kwiofisi yayo yaseDallas.
UPaul Njoroge waseToronto, eCanada, ophulukene nosapho luphela kwingozi ye-ET302, uthe: "Izenzo zikaMark Forkner noBoeing ngokubhekisele kwizatifikethi ze-737 MAX, ukuveliswa nokukhululwa kwintengiso, kukhokelele ekufeni kwabantu abangama-346: phakathi kwabo ngumfazi wam, umama wakhe, nabantwana bethu abathathu. Ngokwamasiko kunye nezenzo zeenkampani, uMark Forkner akazange enze yedwa. Iinqununu ze-Boeing kufuneka ukuba bezisemva kongxamiseko lokuvelisa i-737 MAX, ukuyityhala kwintengiso, iprojekthi yengeniso ephezulu kunye nengeniso, kuyonwabisa iWall Street, kwaye ngokwenza njalo, bampompa isitokhwe seBoeing. Xa i-Lion Air Flight JT610 yaphazamiseka ngo-Okthobha i-29, i-2018, uMark Forkner kunye neenqununu ze-Boeing benza ukubulala okungama-189 kwinqanaba lesithathu. Kodwa emva kokusilela ukuyilahla i-737 MAX emva kwengozi leyo, isusa ukujolisa koluntu kwinkampani isola abo babizwa ngokuba 'ngabangaphandle' babaqhubi, ngenxa yoko babulala abantu abali-157 kwinqanaba lesibini, xa iTopiya Airlines Flight 302 yaphazamiseka. Nge-Matshi 10, 2019.
"Ijaji enkulu yomdibaniso kufuneka ilandele inkqubo yokufumana ubungqina, ibeke abanye ityala, ngakumbi abaphathi abaphezulu eBoeing, emva koko ibabone benetyala ngokusweleka komfazi wam, abantwana bethu abathathu, umamazala wam, kunye nabanye abangama-341. Sibe neengxoxo zecongressal kunye ne-senatorial, apho owayesakuba yi-CEO ka-Boeing, u-Dennis Muilenberg kunye ne Injineli eyiNtloko uJohn Hamilton benqabile ukuphendula imibuzo esisiseko. Ndiyathemba ukuba isimangalo sikaMark Forkner siza kuzisa ubungakanani bokungakhathali, ukufihlwa kolwazi, kunye ne-hubris ngaphakathi kwe-Boeing ekhokelele kwezi ngozi zimbini. Uluntu lufanele ukwazi. Abusoze bubekho ubulungisa kum ngokusweleka kosapho lwam, kodwa kuya kubakho ubulungisa eluntwini ukuba uMark Forkner kunye nabanye eBoeing bajongane nokuvalelwa entolongweni, ”utshilo uNjoroge.
"Isimangalo izolo somqhubi wangaphambili we-Boeing ngokukhohlisa abasemagunyeni malunga ne-737 MAX ngumbumba ococekileyo," utshilo uRobert A. Clifford, umseki kunye neqabane eliphambili lee-Ofisi ze-Clifford Law eChicago kunye ne-Lead Counsel kwityala elihlanganisiweyo elichasene neBoeing kwi Ingozi yokuphulukana ne-737 yabantu ngeyathintelwe ukuba uMark Forkner wayethethile kodwa ngokuqinisekileyo akazange enze yedwa.
U-Forkner, owayekhokele i-737 MAX yeQela loBuchule ngeeNqwelo-moya ngexesha lokuphuhla ngokukhawuleza ukuya kwinkonzo, kuthiwa wagwetywa ngamatyala amabini obuqhetseba abandakanya iinxalenye zeenqwelomoya kurhwebo lwangaphakathi kunye namacala amane obuqhetseba becingo. Kulindeleke ukuba avele ngolwesiHlanu kwinkundla yomanyano eFort Worth, eTexas. Elona tyala libi liphethe isigwebo seminyaka engama-20.
"Olu hlobo lokunyoluka olungenakuthetheleleka ligqitha ngaphaya komqhubi wenqwelomoya kule nkampani ngokungazenzisiyo owenza ezi nqwelomoya ngenzame zokunyusa inzuzo," utshilo uClifford. “NjengoMcebisi oKhokelayo kwityala elichasene ne-Boeing kwaye ndithethe egameni leentsapho ezininzi ezingasokuze zifane, ndiyabongoza i-DOJ ukuba iqhubele phambili kuphando lwayo lolwaphulo-mthetho kunye nezityholo zokufumanisa ukuba ikude kangakanani inkohliso kwaye ngubani emazantsi ayo yonke. Ndicinga ukuba bazakufumana uninzi lwamagosa adibeneyo athathe inxaxheba ekubanjweni kolwazi olubalulekileyo kwiarhente yokuqinisekisa. Uphando olunzulu lolwaphulo-mthetho lufanele ukuhlawulwa kwezi ntsapho ezizincame kakhulu nakuluntu oluphaphazelayo oluqhubeka nokuthenga amatikiti kwinqwelomoya ye-MAX. ”
“Nokuba unganikwa esona sigwebo sikhulu entolongweni, ayonto ithelekiswa nezo ntsapho zingasayi kuphinda zibabone abantu ababathandayo. Abekho; bemkile kuba uForkner ebeyinxalenye yesikimu sokufihla inyani kwabo banesakhono sokwenza ezi ndiza zikhuseleke, ”utshilo uClifford. “Kwaye yasabela njani kuqala iBoeing kwezi ngozi nangona babesazi ukuba basikile iimbombo? Abaphathi beBoeing bakhethe ukugxeka abaqhubi beenqwelomoya abamsulwa abangaxelelwanga nto ngenkqubo entsha yesoftware etshintshe ngokupheleleyo indlela ezisebenza ngayo iinqwelomoya, kwaye neencwadana zoqeqesho lokuqhuba zingakhankanyi nenkqubo entsha yesoftware. ”
UClifford ubhekisa kwiNkqubo yokuNyusa amaNqaku okuQinisekiswa kweMpawu (i-MCAS) ekuthiwa yiForkner akazange abelane ngayo namagosa e-FAA ngaphambi kokuba avume inqwelomoya njengekhuselekileyo ukubhabha.
"Uluntu oluphaphazelayo aluqinisekanga nokuba iBoeing itshintshile iindlela zayo kwaye isebenza ngokusekuhleni ngokuvumela le nqwelo moya kunye nezinye ezizayo," utshilo uClifford.